फाइनान्सको २६ करोड ६ लाखको हकप्रद खुल्यो, कहिले गर्ने आवेदन ? – Arthatantra.com
फाइनान्सको २६ करोड ६ लाखको हकप्रद खुल्यो, कहिले गर्ने आवेदन ?
काठमाडौ । सेन्ट्रल फाइनान्सले एक सय रुपैयाँ अंकित मूल्यका २६ करोड ६ लाख रुपैयाँ बराबरको २६ लाख ३ हजार कित्ता हकप्रद शेयर निष्कासन गरेको छ । कम्पनीले दुई बराबर एक अर्थात ५० प्रतिशत हकप्रद शेयरको निष्कासन गरेको हो।
हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी ५२ कारेड रुपैयाँ छ । हकप्रद निष्कासन तथा बाँडफाँट पश्चात कम्पनीको चुक्तापूँजी ७८ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड रहेको छ ।
शेयरधनीहरुले विक्री प्रबन्धकका साथमा सेन्ट्रल फाइनान्सका सम्पूर्ण शाखा कार्यालय, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका विराटनगर, विरगन्ज, नेपालगंज, इटहरी र धनगढी शाखा कार्यालय र आस्बा सदस्य कम्पनी तथा वित्तीय संस्थाहरु र तिनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् ।
फाइनान्सले ५० प्रतिशत हकप्रद जारी गर्न पुस ४ गते सेयरधनी किताब बन्द गरेको थियो । पुष ३ गतेसम्म कायम सेयरधनीले हकप्रदका लागि पुस २३ गतेदेखि माघ २८ गतेसम्म आवेदन दिन पाउनेछन् ।
राष्ट्र बैंकको व्यस्था अनुसार फाइनान्सले चुक्ता पुँजी बढाएर ८० करोड रुपैयाँ पुर्याउनु पर्नेछ ।